Parakleto - Wikipedia
Ny Parakleto, olona na fanahy misahana anjara asa mpiaro na mpanelanelana na mpampionona na mpisolo vava. Amin' ny fivavahana jiosy dia manondro ny Mesia ny teny hoe parakleto, fa ao amin' ny fivavahana kristiana dia ampiasaina matetika io teny io hanondroana ny Fanahy Masina. Amin' ny fivavahana silamo dia manondro an' i Jesoa avy eo ny mpaminany Mohamady io teny io.
Ny teny hoe parakleto dia avy amin' ny teny grika hoe παράκλητος / parakletos izay navadika amin' ny teny latina hoe paracletus ao amin' ny fandikan-tenin' i Hierônimo avy any Stridôna (na Masindahy Jerôma) ny Evanjelin' i Joany. izay midika hoe "mpisolo vava" na "mpanampy". Avy amin' ny matoanteny grika hoe παρακαλέω / parakaléô "miantso ho eo akaikin' ny tena".
Ao amin' ny Baiboly amin' ny teny malagasy izany dia adika hoe "Mpananatra" (ao amin' ny Baiboly prôtestanta) na "Mpanafaka alahelo" (ao amin' ny Baiboly katôlika) na "mpanampy" '(ao amin' ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah). Manondro ny Fanahy Masina izany teny izany.
↑ Jereo ny ao amin' ny Jaona 15.26: "Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin' ny Ray, dia ny Fanahin' ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin' ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy".
↑ Jereo ny ao amin' ny Joany 15.26: "Rahefa tonga ny Mpanafaka alahelo izay hirahiko aminareo avy amin' ny Ray, na ny Fanahin' ny fahamarinana izay avy amin' ny Ray, dia izy no hanambara ahy.".
↑ Jereo ny ao amin' ny Jaona 15.26: "Ho tonga ny mpanampy, izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray. Rehefa tonga izy io, izany hoe ny fanahin’ny fahamarinana avy amin’ny Ray, dia hanome porofo momba ahy.".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Parakleto&oldid=1037740"
Dernière modification le 12 Septambra 2021, à 12:58
Voaova farany tamin'ny 12 Septambra 2021 amin'ny 12:58 ity pejy ity.